हाम्रो संगठनको केन्द्रमै गुट उपगुट देखियो ः रवीन्द्र श्रेष्ठ (केन्द्रीय पार्षद ने.नि.क. यु. सं इलाम) — Motivate News
Posted on April 16, 2017 by motivate news
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को सातौं महाधिवेशनको अन्योल कहिलेसम्म ?
हाम्रो संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका साथीहरु सबैले निर्वाचन आयोगले लगाएको आचार संहिता समाप्त भएको १५ दिनभित्र कुनै पनि हालतमा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय भएको जनकारी हामीले पाएका छौं । विगतका दिनहरुमा पनि मिति तय भएर समेत अन्तिममा रोकिएको कारण सबै साथीहरु यसमा आस्वस्त हुन सक्नुभएको छैन । समयमा नै महाधिवेशन गरेर उचित जिम्मेवारी पाएमा काम गर्ने जोश जाँगर हुन्छ भने संगठनको क्रियाशीलता समेत बढ्ने भएकाले यसलाई हाम्रो मूल नेतृत्वले मनन गर्नैपर्छ ।
अबचाँही हुन्छ नै भन्ने के ग्यारेन्टी ?
अब हाम्रो संगठनको सातौं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न नगर्ने हो भने यसले धेरै नै क्षति हुने निश्चित छ । जिल्लाका धेरै साथीहरुमा केही निराशाका बादलहरु देखा परिसकेको छ । हाम्रो आवाजलाई केन्द्रले ध्यान दिएन भन्ने उनीहरुको गुनासो छ । हामीलाई अन्य संगठनकले शंका गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) लाई सबै निजामती कर्मचारीहरुको आस्था तथा विश्वासको केन्द्र बनाएर आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्रथम स्थान हासिल गर्ने हो भने जेठ महिनामा कसैगरी पनि संगठनको निर्वाचन गर्नैपर्नै बाध्यता छ ।
युनियनको केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरु विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित छन् भन्ने हल्ला छ, यसरी एउटै संगठनमा रहेर गुट सञ्चालन गर्न मिल्छ ?
तपाईले गर्नुभएको प्रश्न केही मात्रामा सही छ । अहिलेको हाम्रो संगठन भनेको एकतापछिको एकीकृत संगठन हो । यसमा रहेकाहरुमा नै यो हाम्रो पक्षको र ऊ अन्य गुटको भन्ने भावना रहेको देखियो । संगठनभन्दा आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्ने प्रवृति मौलाउदै गएको छ । संगठनमा आफू र आफूले भनेको मान्नेहरुलाई कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने ब्यवहार प्रदर्शन भएको छ । जिल्लाका सबै साथीहरुले यसबारेमा केन्द्रलाई खबरदारी गरिरहेका छन् तैपनि यसमा केही समस्या छ ।
निजामती कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान इच्छुक नहुनुको कारण के हो ?
यसमा विविध कारणहरु छन् । हामी अहिले केन्द्रमा रहेका निजामती कर्मचारीहरु भनेको लोकसेवाकाट छनौट भएर आएका हौं । स्थानीय निकायमा रहेका धेरै कर्मचारीहरु लोकसेवाबाट पास भएर आएका होइनन् । उनीहरु पनि दक्ष होलान् सक्षम छन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर हामीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा उनीहरुको मातहतमा बसेर काम गर्नचाँही कुनैपनि हालतमा सक्दैनौं । हाम्रो अनुभव, क्षमता, दक्षतालाई उचित मुल्याँकन गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । उनीहरुले हाल पाइरहेको सेवा सुविधा के हुने ? वृत्ति विकासका कुराहरु कस्तो हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर मात्र समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको आधिकारिक धारणा छ
यसमा त आधिकारिक ट्रेड युनियनले ले विशेष पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
हो तर यसले अहिलेसम्म काम नै गर्न सकेको छैन । सरकारले कर्मचारीहरुलाई अल्मल्याउन मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेको जस्तो देखियो । यसले कर्मचारीहरुका विषयमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् । यसमा निजामती कर्मचारीहरुले आशा गरेका छन् । तर यो आफैं कुइरोको काग झैं भएरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको समेत ब्यवस्था समेत हुन सकेको छैन । बजेटको प्रबन्ध गरिएको छैन ।
किन यसले काम देखाउन सकेन ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु विभिन्न आस्था राख्ने संगठनहरुबाट आएका छन् , उनीहरुको मुल सिद्धान्त नै भिन्न छ । अर्को कुरा त्यसमा पनि कुन कर्मचारी आफु निकटको हो भन्ने पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको देखिएको छ । सबै कर्मचारीको मुद्धामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ब्यक्ति हेरेर काम गर्ने परिपाटी भयो । कोही कर्मचारी हिमाली क्षेत्रमा नै काम गरेर निस्कनुपर्ने अवस्था छ भने कोही कर्मचारी काठमाडौंमै रहेर पेन्सन पकाउने भए । सारमा भन्ने हो भने जुन उदेश्य राखेर आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गरिएको थियो त्यो अनुकुल काम हुन सकेन । नेतृत्वले ब्यक्ति च्याप्ने गरेको देखियो भने सरकारलाई खासै दवाब दिएर काम गर्न सक्ने खुबी देखिएन ।
अबको युनियनको नेतृत्वबारे के धारणा छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)लाई सबै कर्मचारीहरुको साझा चौतारी बनाउने हो भने सबैलाई समेटेर काम गर्न सक्ने योग्य नेतृत्व आउनुपर्छ । यो एकताको महाधिवेशन पनि हो यसलाई ख्याल गरिनुपर्छ । केन्द्रले उम्मेदवारहरुको छनौट गर्दा सबै कुरामा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । ताकि यसले विभाजनको बिऊ रोप्ने काम नगरोस् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा चलखेल भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा गृहकार्य गरेको जस्तो हामीलाई लागेन । कर्मचारीको रुचि, घरपायक, महिला कर्मचारीको बाध्यता, जागिरको अवधि सबैको मूल्यांकन गरेर मात्र कर्मचारीहरुलाई खटाएको भए उनीहरुमा असन्तोष हुने थिएन । निजामती कर्मचारीहरुकै हक अधिकारको लागि सरकारसँग सामुहिक सौदावाजी गर्ने भनेर गठन भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व समेत यसमा असफल देखियो ।
इलाम लगायत १ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनको कस्तो रहेको छ ?
समग्र १ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनावको माहोल तातिसकेको छ । क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार छनौट गर्न पटक पटक गम्भीर छलफलहरु भइरहेको छ । सरकारी तबरबाट पनि धेरै तयारी पूरा भइसकेको छ । आजबाट निर्वाचन अधिकृतहरु कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् । गाउँ गाउँमा निर्वाचन मतदाता कक्षाहरु सञ्चालन हुँदैछ । जनतामा एक किसिमको नयाँ उत्साह थपिएको छ ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, समाचार, समाज | Leaveareply